Shuute oo ku dhawaaqay digniin ku socota Saraakiisha Ciidamada Dowladda - Awdinle Online
Shuute oo ku dhawaaqay digniin ku socota Saraakiisha Ciidamada Dowladda
Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur ayaa uga digay Saraakiisha iyo Ciidamada ku sugan Gobolka Gedo dhibaateynta dadka Shacabka.
Isaga oo Boqolaal Askari kula hadlayay Xadka ay Soomaaliya la wadaagto Kenya dhinaca degmada luuq ayuu sheegay in Ciidamada looga baahan yahay in ay noqdaan kuwo afkooda iyo gacantooda laga nabadgali, isla markaana ay badbaadiyeen dadka Shacabka ah.
Waxaa uu sheegay in askarigii dhibaateeya dad Shacab ah aan marnaba laga yeeli doonin, isla markaana Maxkamadda Ciidamada ay tallaabo ka qaadi doonto.
Mas’uuliyiinta Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo maalmahaan socdaal ku marya degaano ka tirsan Gobolka Gedo ayaa xukuno kala duwan waxaa ay ku ridden Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda iyo rag lagu eedeeyay inay la Shaqeynayeen Al-Shabaab.
Previous articleC/raxmaan C/Shakuur oo sheegay inay Guul dareysatay Dowladda Madaxweyne Farmaajo
Next articleMadasha Xisbiyada Qaran oo mowqif cad ka qaatay xaaladda kala guurka
Madaxweynaha Hir-Shabeelle oo Magacaabay Guddiga doorashooyinka dadban
Puntland oo hor-istaagtay Ciidamo howlgal ka fulin lahaa degaanka Saaxo